भ्यालेन्टाइन डे २०१९ स्पेशल: भुलेर पनि आफ्नो क्रशलाई नगर्नुहोस यि स्थानमा प्रपोज!
माघ २९, २०७५ बिगुल न्यूज- SG
भ्यालेन्टाइन डेमा तपाइले आफ्नो क्रशलाई प्रेम व्यक्त गर्नु जीवनको सबैभन्दा राम्रो क्षण मध्ये एक हुनेछ । यदि मौका भ्यालेन्टाइन डेको हो भने यसको वास्तविकताले तपाईलाई खुशी दिन्छ । केहि मानिस जब आफ्नो क्रशलाई प्रपोज गर्छन तब उसलाई यसमा आफु कतिको सफल भईन्छ र क्रशको जवाफ के आउछ भनेर सबैभन्दा बढी डरले सताउने गर्छ।
सबै चाहन्छन् कि आफ्नो जीवनको पहिलो प्रपोजल सबैभन्दा सुन्दर होस र जसलाई जिवनभर याद गर्न सकियोस । यसको लागि तपाई पहिलो पटक कसैलाई प्रपोज गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईलाई कसैले प्रपोज गर्दैछ भने यसलाई यादगार बनाउने कोसिश गर्नुहोस। केहि मानिस प्रपोज गर्ने समयमा यस्तो गल्ति गर्छन जसले उनको प्रपोजललाई खराब बनाउछ । र भ्यालेन्टाइन डेको दिन धेरै प्रेमी-प्रेमिकाहरुमा खुसि छाउछ तर प्रपोजल रिजेक्ट भएको कारण तपाईलाई भने दुखि बनाउन सक्छ । यदी तपाई यस्तो चाहनुहुन्न भने यस भ्यालेन्टाइन डेमा भुलेर पनि यी स्थानहरुमा प्रपोज नगर्नुहोस ।
सोशल मिडियामा प्रपोज गर्नबाट बच्नुहोस: आधुनिक समयमा सोशल मिडियामा पोस्ट नगरी युवाहरुको दिन पुरा हुदैन । आजकल आफ्नो निजी जीवनको क्षणहरू सोशल मिडियामा शेयर गर्ने चलन निकै ट्रेन्डमा रहेको छ। यस्तैमा अधिकांश मानिस आफ्नो पार्टरलाई प्रपोज गर्नको लागि सोशल मिडियाको सहारा लिन्छन्। तपाई पनि यदी यस भ्यालेन्टाइन डेमा यस्तै गर्ने सोच गर्नुभएको छ भने यस्तो गर्न रोक्नुहोस। सोशल मिडियामार्फत आफ्नो क्रशलाई प्रपोज गर्नुको सट्टा उनलाई कुनै रोमान्टिक स्थानमा लिएर जानुहोस र आफ्नो माया व्यक्त गर्नुहोस।
कारमा यात्रा गर्दा भुलेर पनि प्रपोज नगर्नुहोस: तपाई जसलाई माया गर्नुहुन्छ उसलाई कारमा प्रपोज गर्नु निकै नराम्रो उपाय हो । कुनै विशेष मानिसलाई जीवनको हिस्सा बनाउनको लागि तपाईको सुरुवात पनि विशेष हुनुपर्दछ। ताकि जीवनभर यो पल याद होस् । तर कारमा आफ्नो विशेष मनिसलाई प्रपोज गर्दा तपाई उ प्रति पुरै समर्प्रित नभएको र उसलाई स्पेसल महसुस गराउनको लागि केहि तयारी नगरेको तपाईको पार्टनरलाई लाग्न सक्छ। यसैले गर्दा तपाइको प्रपोज रिजेक्ट हुनसक्छ।
थिएटरमा फिल्म हेर्ने समय: तपाईले धेरै यस्ता मानिस देख्नुभएको होला जो आफ्नो डेटलाई रोमान्टिक बनाउनको लागि थिएटर जाने गर्छन । तर थिएटरमा आफ्नो माया व्यक्त गर्नु सबैभन्दा खराब आइडिया हो। थिएटरमा अध्यारो, मानिस र फिल्मको साउन्ड हुने भएकोले तपाइको डेट रोमान्टिक बन्दैन् । त्यसैले तपाईले आफ्नो भ्यालेन्टाइन र प्रपोजललाई यादगार बनाउनको लागि कुनै राम्रो रोमान्टिक स्थानमा जाने योजना बनाउनुहोस्।
पब्लिकमा प्रपोज नगर्नुहोस: जब तपाई कसैलाई प्रपोज गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको लागि मात्रै होइन तपाइको पार्टनरको लागि पनि महत्वपूर्ण क्षण हुनेछ। तपाई आफ्नो पार्टनरलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ भने पनि पब्लिक स्थानमा आफ्नो पार्टनरलाई प्रपोज नगर्नुहोस। किनकी तपाईको पार्टनरलाई पब्लिक स्थानमा कम्फर्टेबल महसूस हुदैन र प्रपोज रिजेक्ट हुनसक्छ। त्यसैले रोमान्टिक स्थानमा आफ्नो पार्टनरलाई प्रपोज गर्ने कोशिस गर्नुहोस।
प्रकाशित : मङ्गलबार, माघ २९, २०७५१२:४०
मानिसमा जानी-नजानी किन हुन्छ यस्ता अजिब कुराहरु? जानीराखौ!
१ दिन अगाडि BNNTV